BUDDHIST TERMS' Dictionary: TONSURE - ကေသစ္ဆေဒန
TONSURE - ကေသစ္ဆေဒန
ကေသစ္ဆေဒန (Kesacchedana) - ဆံပင်ရိတ်ခြင်း၊ ဆံချခြင်း။
ပဗ္ဗဇ္ဇမင်္ဂလာတွင် သာမဏေလောင်းအား ဆံချသည့် ကေသစ္ဆေဒနမင်္ဂလာ အခမ်းအနားသည် အရေးပါသော ကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထိုကေသစ္ဆေဒနမင်္ဂလာကို ပြုသောအခါ ရှင်လောင်းသည် တစပဉ္စကကမ္မဋ္ဌာန်းကို ရွတ်ဖတ်ဆင်ခြင်၍နေရသည်။ အချို့ ပါရမီထူးရှိသော ရှင်လောင်းများမှာ ထိုသို့ဆင်ခြင်စဉ်ပင် ရဟန္တာ ဖြစ်သွားခဲ့ကြသည်။
Shaving the head for novitiation
The rite of shaving the head is an important part ofanovitiation ceremony. The novice-to-be has in the course of the shaving, to utter the five Pᾱli words (hair, bodyhair, nails, teeth, skin). They are representative of the 32 parts of the body which are reflected upon as being loathsome and unworthy of attachment. Such reflection can lead to arahatship for those who have sufficient store of past merit, as had been the case ofafew young arahats during the lifetime of the Buddha.